Xukun 11 sano oo lagu Riday Cid Geeysatay Fal Dil ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xukun 11 sano oo lagu Riday Cid Geeysatay Fal Dil ah
La daabacay tisdag 10 april 2012 kl 15.13
Maxkamadda degmada ee magaalada Lund ayaa ku riday xukun 11 sannadood ah wiil 21-jir ah ee lagu soo oogay inuu ka dambeeyey dil loo geeystay 16-jir
magan-gelyo doon ah ee ka dhacay magaalada Eslöv. Halka laba kale ee 20 iyo 22 jir ahna lagu riday xukun saddex iyo afar sannadood ah, iyadoona lagu eedeeyey iney ka taakuleeyeen fal-dambiyeedkaa.
Xukunka maxkamadda ayaa ka hooseeyey midkii uu xeer-ilaaliyuhu dalbaday in lagu rido eedeeysanayaasha ka dambeeyey dilkii wiilka 16-jirka ahaa ee ka soo qaxay dalka Afgaanistaan si uu magan-gelyo dalkan uga helo, islamarkaana madaxa looga toogtay magaalada Eslöv bishii oktoobar ee sannadkii tagay.
Xeer-ilaaliyaha ayaa maxkamadda u soo jeediyay 21 iyo 22-jirrada lagu xukummo iney dilkaa ka dambeeyeen muddo ah 16 iyo 10 sannadood oo xarig ah, eedeeysanaha saddexaadka 8 sannadood, maadaama uu ka taakuleeyay falkaa. Halka ay maxkamadda degmaduna doortay in aaney raacin fikirka xeer-ilaaliyaha.
Wiilka 22-jirka ee lagu riday xukunka 11 sannadood ah ayaa horayba u qirtay inuu falkaa ku kacay, hase yeeshee uu kama' ku dhacay, halka labada kalena ey fal-dambiyeedkaa iska dheereeyeen intii baaritaanku socday.